W.beeraha Puntland oo ka digtey khatar kasoo socota abaaraha [Dhegeyso] • Horseed Media
You are here: Home / Communities / W.beeraha Puntland oo ka digtey khatar kasoo socota abaaraha [Dhegeyso]
W.beeraha Puntland oo ka digtey khatar kasoo socota abaaraha [Dhegeyso]
March 20, 2012 - By: Moha Salat
Wasaaradda beeraha iyo waraabka ee Puntland ayaa ka digtey abaarta ka jirta qaar kamid ah gobolada Puntland.
Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Eng. Maxamuud Xaaji Saalax (Biriishkolo) oo xafiiskiisa magaalada Garoowe Saxaafadda shir ugu qabtay ayaa ka hadlay xaaladaha abaareed ee xiligan ka jira deegaano ka tirsan Puntland.
Wuxuuna sheegay inay jiraan deegaano badan oo mudo dhowr sano ah aan wax roobab ah helin, roobabkii xiliga dayrtuna ay baaqdeen, islamarkaana ay khatar xooggani soo wajihi doonto hadii ay roobabka xiliga gugu ka baaqdaan.
Eng. Biriishkolo wuxuu sheegay in wasaaraddiisu ay gudiyo dhowr ah u dirtay deegaanada ay abaartu saamaysay si ay qiimeyn ugu soo sameeyaan heerka ay gaarsiisan tahay. Wasiirku wuxuu tilmaamay in qiimeyn kadib ay wasaaradu ogaatay iney soo fool leedahay khatar ka timaada abaarta sidaas darteedna ay tahay in laga gaashaanto.
Dhegeyso Shirka Jaraa’id ee Wasiirka Beeraha iyo Waraabka ee Puntland
Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee Puntland wuxuu ugu danbeyntii baaq sidii arintaas wax looga qaban lahaa ku aadan u diray hay’adaha caalamiga ah ee samafalka, isagoo ku booriyey inaysan arintaas dhayalsan si deg deg ahna ay uga jawaabaan.
Gobolada ay abaartu saameysey waxaa kamid ah: Mudug, Sanaag, Haylaan, Nugaal, iyo Bari oo isagu ah kan ugu daran, gaar ahaan deegaanada xeebaha kulaala ee ku yaal bariga fog.
Waxaana xusid mudan inay jiraan deegaano badan oo gobolka Bari ka tirsan kuwaas oo mudo 5-sano ku dhow aan wax roob ahi ka di’in, islamarkaana ay adag tahay in laga helo biyo la cabo maadaama inta badan ceelashii laga dhaansan jirey ay qalaleen.